क्यानाबिनोइड्सको अल्ट्रासोनिक डेकारबॉक्सीलेसन - हिलस्चर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
CBD, THC र CBG जस्ता धेरै अरूलाई डकार्बोक्सिलेटेड क्यानाबिनोइडहरू सक्रिय फारमको रूपमा चिनिन्छ, जसले मानव शरीरमा अधिक प्रभावकारी र सफल प्रभावहरू देखाउँदछ (जस्तै एंडोकानबिनोइड प्रणाली)। अल्ट्रासोनिकेसन एक ड्याकारबोक्सीलेट क्यानाबिनोइड्स (उदाहरण सीबीडीए, टीएचसीए, सीबीजीए) लाई उनीहरूको जैविक दृष्टिबाट अधिक सक्रिय रूपहरू (उदाहरण, सीबीडी, THC, CBG) निकाल्नको लागि एक उच्च प्रभावी टेकनीक हो।
Sonication साथ Decarboxylate Cannabinoids
CBD यसको स्वास्थ्य-प्रबर्द्धन र औषधीय प्रभावहरूको लागि परिचित छ। तर दुबै प्रकारको भांगको बोटमा, भांग र मारिजुआनामा मुख्यतया क्यानाबिडिओलिक एसिड (सीबीडीए) फेला पर्दछ, जबकि क्यानाबिडियोल (सीबीडी) थोरै परिमाणमा मात्र पाइन्छ।
CBD र CBDA बीच के भिन्नता छ?
CBDA CBD का अग्रदूत हो र एक एसिडिक समूह CBD अणु संग जोडिएको छ, एक तथाकथित carboxyl-group। दुबै, सीबीडी र सीबीडीए, गैर-मादक, गैर साइको-सक्रिय पदार्थहरू हुन्, जसको मतलब तिनीहरू "उच्च" प्रभाव उत्पादन गर्दैनन्। तर CBD र CBDA को बायोएक्टिभ प्रभावहरू धेरै फरक छन्। CBDA एक तटस्थ, महत्त्वपूर्ण कम सक्रिय रूप हो, जबकि – जब CBD लाई डिकार्बोकलाइटेड – सीबीडी अणुहरूले उनीहरूको पूर्ण स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने बायोएक्टिभ प्रभावहरूलाई औषधि र आहार पूरकको रूपमा समर्थन गर्दछ।
डिकार्बॉक्सिलेसनले अन्य सबै अम्लीय क्यानाबिनोइड फार्महरूलाई असर गर्दछ जस्तै THCA, CBGA र अरूलाई पनि। कारबक्सिल समूह हटाइयो ताकि सक्रिय फारमहरू, उदाहरण को लागी, CBD, ∆⁹-THC (THC), CBG, आदि प्राप्त।
अल्ट्रासोनिक डिकार्बॉक्सिलेसन कम सक्रिय फारामलाई अधिक सक्रिय क्यानाबिनोइड फार्ममा बदल्छ तीव्र अल्ट्रासाउन्ड तरंगहरू मार्फत कारबक्सिल समूह हटाएर।
अल्ट्रासोनिक क्यानाबिनोइड डेकारबॉक्सीलेसन
ड्याकरबॉक्सीलेसन (डार्बरिंग) भांग प्रशोधनको सामान्य चरण हो। परम्परागत सजावट प्रक्रियामा, उत्पादकहरूले नयाँ प्लान्ट भागहरूमा सुख्खा तापको प्रयोग गर्दछन् जसले सीबीडीएलाई सीबीडी, ∆--THC- एसिड (THCA) लाई ∆--THC (THC), CBGA मा CBG मा रूपान्तरण गर्दछ। यो अतिरिक्त हो निष्कर्षण भन्दा पहिले प्रि-प्रोसेसिंग चरण र समय र उर्जा चाहिन्छ।
अल्ट्रासोनिक डेकारबॉक्सीलेशनले विभिन्न फाइदाहरूबाट पारम्परिक डेकारबॉक्सीलेशनलाई उत्कृष्ट बनाउँछ। पहिलो, अल्ट्रासोनिक डिकार्बॉक्सिलेसन अतिरिक्त प्रक्रिया चरण होइन, तर यो एकै साथ हुनेभएको छ जब भांग वा मारिजुआनाबाट अल्ट्रासोनिकेशन मार्फत क्यानाबिनोइड्स निकालिन्छ। अल्ट्रासोनिक भांग उपचार एक साथ फिटोकानाबिनोइड्स को निकासी र decarboxylation को लागी राम्रो तरीका हो। अल्ट्रासोनिक प्रविधी उच्च निकासी र decarboxylation दर नियन्त्रण र तापमान र छोटो उपचार समय अन्तर्गत पार गर्दछ। यसले विघटनको विरुद्धमा फाइटोक्वाबिनोइन्ड्सलाई रोक्दछ: अल्ट्रासोनिक रूपमा डिकार्बॉक्लेटेड क्यानाबिनोइड एक्स्ट्रक्ट्समा कुनै क्यानबिनोल (सीबीएन) फेला पर्दैन। क्यानबिनोल एक आम अक्सिडेसन बाइ-प्रोडक्ट हुन्छ र गुणस्तरको मार्कर हो। यसको मतलव अल्ट्रासोनिक डार्बिंगको नतीजा एक उच्च-गुणवत्ताको भांग एक्सट्रेक्टमा हुन्छ।
यसबाहेक, सबै अल्ट्रासोनिक रूपमा प्राप्त एक्स्ट्र्यासन र डिकरोबक्सिलेसन परिणामहरू पूर्ण रूपमा दोहोरिने योग्य र पुन: उत्पादन योग्य छन्। सबै अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया प्यारामिटरहरू ठ्याक्कै नियन्त्रण योग्य छन्, निष्कर्षण र decarboxylation परिणाम विश्वसनीयता संग पुन: उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसले उत्पादकहरूलाई उनीहरूको प्रक्रियालाई मानकमा राख्न र उनीहरूको ग्राहकहरूलाई लगातार उच्चतम गुणवत्ताको भांग अर्कहरू प्रदान गर्न सक्षम गर्दछ।
अल्ट्रासोनिकरेटर UP400St एकै साथ डिकार्बॉक्सिलेसन र क्यानाबिनोइड्सको निकासीको लागि क्यानाबिस सेटिवा एलबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अल्ट्रासोनिक डिकार्बक्सिलेसनका फाइदाहरू
सँगै निकासी र decarboxylation
हल्का, गैर थर्मल प्रक्रिया
क्यानाबिनोइड्सको विघटन हुँदैन
पुनरावृत्ति, पुन: उत्पादनक्षमता
कुनै पनि भोल्युमका लागि उपलब्ध
Standarized उत्पाद गुणवत्ता
Sonication द्वारा कसरी Cannabinoids सजावट गर्न
Sonication सीबीडीए, ∆--THC- एसिड / TCA, CBGA आदि जस्ता एसिडिक क्यानाबिनोइड्सलाई CBD, ∆--THC, CBG आदिको बायोएक्टिभ रूपहरूमा रूपान्तरण गर्न सक्दछ तातो उपचार। यसलाई थर्मो-सोनिकेसन भनिन्छ। CBD, ∆9-THC, र CBG को इष्टतम उत्पादन ११० डिग्री सेल्सियस मा प्राप्त गरियो।
क्यानाबिनोइड्स र मानव शरीरमा उनीहरूको प्रभावहरू
क्यानाबिस सतिवा एल प्लान्ट ११3 भन्दा बढी किसिमका क्यानाबिनोइडहरू समृद्ध छ। उदाहरणका लागि, सीबीडी, सीबीडीए, टीएचसी, टीएचसीए, सीबीजी र सीबीजीए अरू सबैमा क्यानाबिनोइडहरू (फाइटोकानाबिनोइड पनि भनिन्छ) भांगको बोटमा पाइन्छ। क्यानाबिनोइड्स मानव शरीरमा पनि फेला पर्दछ, जहाँ तिनीहरू अन्तःस्रावी प्रणालीमा स sign्केतन अणुहरूको रूपमा कार्य गर्दछन्। मानव शरीर द्वारा उत्पादित क्यानाबिनोइड्सलाई एन्डोकानाबिनोइडहरू भनिन्छ। एन्डोकानाबिनोइड्स न्यूरोट्रान्समिटरको रूपमा कार्य गर्दछ जुन क्यानाबिनोइड रिसेप्टर्ससँग बाँधिन्छ। एन्डोकानाबिनोइड्स र क्यानाबिनोइड रिसेप्टर्सहरूको जैविक प्रणालीलाई एन्डोकानाबिनोइड प्रणाली भनिन्छ र शारीरिक कार्यहरूको नियमनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
जस्तो कि बोटबाट लिइएको क्यानाबिनोइड्स मानव क्यानाबिनोइड रिसेप्टर्समा डक गर्न सक्छन्, क्यानाबिनोइड्सलाई चिकित्सा / औषधीय उपचारको रूपमा र स्वास्थ्य-प्रचारक आहार अनुपूरकको रूपमा प्रशासित गरिन्छ।
UIP2000hdT एसिडिक क्यानाबिनोइड्सको डकार्बोक्सीलेसनको लागि (उदाहरण क्यानाबिनोइडिक एसिड सीबीडीए) सक्रिय क्यानाबिडिओल (CBD) मा
क्यानाबिनोइड डेकरबॉक्सीलेसनको लागि अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्रक्टरहरू
अल्ट्रासोनिक निकासी र डेकारबॉक्सीलेसन एक भरपर्दो प्रसंस्करण टेक्नोलोजी हो, जसले क्यानाबिस सेटिवा एल प्लान्ट (हेम्प र मारिजुआना) बाट उच्च गुणवत्ताको क्यानाबिनोइड एक्स्ट्रक्सको उत्पादनलाई सघाउ पुर्‍याउँछ। हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स पोर्टफोलियोले कम्प्याक्ट ल्याब अल्ट्रासोनिकेटरहरूबाट औद्योगिक निष्कर्षण प्रणालीसम्म पूर्ण दायरा कभर गर्दछ। यसैले, हामी हिलस्चरमा तपाइँ तपाइँको परिकल्पना गरिएको प्रक्रिया क्षमताको लागि सबैभन्दा उपयुक्त अल्ट्रासोनिकेटर प्रस्ताव गर्न सक्दछौं। हाम्रो लामो समय-अनुभवी कर्मचारीले तपाईंलाई अन्तिम उत्पादन स्तरमा तपाईंको अल्ट्रासोनिक प्रणालीको स्थापनाको लागि सम्भाव्यता परीक्षण र प्रक्रिया अनुकूलनबाट सहयोग गर्दछ।
हाम्रो अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्रक्टरको सानो फुट प्रिन्टको साथ साथै स्थापना विकल्पहरूमा तिनीहरूको बहुमुखी प्रतिभाले उनीहरूलाई भांग प्रशोधन सुविधाहरूको धेरै सीमित स्थानमा पनि फिट गर्दछ। अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरू खाद्य, फार्मा र पोषण पूरक उत्पादन सुविधाहरूमा विश्वव्यापी रूपमा स्थापित छन्।
परिष्कृत एक्सट्र्याक्शन र डेकरबॉक्सीलेसन प्रणालीहरू
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स उत्पाद पोर्टफोलियोले उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिकेटरको पूर्ण दायरा कभर गर्न र सानोदेखि ठूला मा decarboxylation को कभर गर्दछ। थप सामानहरूले तपाईंको भांग निकासी / डिकार्बक्सिलेसन प्रक्रियाको लागि सबैभन्दा उपयुक्त अल्ट्रासोनिक उपकरण कन्फिगरेसनको सजिलो सम्मेलनको लागि अनुमति दिन्छ। इष्टतम अल्ट्रासोनिक सेटअप परिकल्पना गरिएको क्षमता, भोल्यूम, कच्चा माल, ब्याच वा इनलाइन प्रक्रिया र समयरेखामा निर्भर गर्दछ।
हिल्सचर अल्ट्रासोनिकेटरहरू ब्याच र अविरल प्रवाह-थ्रु प्रक्रियाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अल्ट्रासोनिक ब्याच प्रोसेसिंग प्रक्रिया परीक्षण, अनुकूलन र सानोदेखि मध्यम आकारको उत्पादन स्तरको लागि आदर्श हो। एसिडिक फाइटो-क्यानाबिनोइड्स (जस्तै, सीबीडीए, टीएचसीए, सीबीजीए) को अल्ट्रासोनिक डिक्रॉबक्सिलेशन कुनै खुला वा बन्द अल्ट्रासोनिक बेकरमा साथ साथै एक अल्ट्रासोनिक फ्लो सेल रिएक्टरको प्रयोग गरेर निरन्तर उपचारमा देखा पर्न सक्छ। तपाइँको भांग मात्रा र प्रक्रिया लक्ष्यहरूको लागि सेटअप।
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स उत्पाद दायराले प्रति घण्टा ट्रक भारहरू प्रशोधन गर्ने क्षमतासहित बेन्च-टप र पायलट प्रणालीहरूमा कम्प्याट ल्याब अल्ट्रासोनिकरेटरहरूबाट पूर्ण-औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरूको पूर्ण स्पेक्ट्रम कभर गर्दछ। पूर्ण उत्पाद दायराले हामीलाई तपाईंको गाँजा कच्चा माल, प्रक्रिया क्षमता र उत्पादन लक्ष्यहरूको लागि तपाईंलाई सबैभन्दा उपयुक्त अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्रक्टर / डेकारबोक्सीलेटर प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ।
सबै हिल्सचर अल्ट्रासोनिकेटरहरू ठ्याक्कै नियन्त्रण योग्य छन् र यसरी उत्पादनमा भरपर्दो कार्य घोडाहरू। आयाम एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया प्यारामिटर हो जसले क्यानाबिस सेटिवा एलको अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्याकको दक्षता र प्रभावकारितालाई असर गर्छ र क्यानाबिनोइड्सको एक साथ डिकार्बोक्सिलेशन।
सटीक आयाम सेटिंग्स र स्मार्ट सफ्टवेयर मार्फत अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया प्यारामिटरहरूको स्थायी अनुगमनले तपाईंलाई सबैभन्दा बढी प्रभावकारी अल्ट्रासोनिक सर्तहरूको साथ तपाईंको भांग सामग्रीको उपचार गर्न सक्ने सम्भावना दिन्छ। उत्तम निकासी र decarboxylation परिणामहरूको लागि इष्टतम Sonication!
अल्ट्रासोनिक प्रक्रियाहरू पूर्ण रूपमा रैखिक मापन गर्न सकिन्छ। यसको मतलव तपाईले ल्याब वा बेन्च-शीर्ष अल्ट्रासोनिकेटरको प्रयोग गरेर प्राप्त गर्नुभएको प्रत्येक परिणामको रूपमा, उही उस्तै प्रक्रिया प्यारामिटरहरू प्रयोग गरेर ठीक उही आउटपुटमा मापन गर्न सकिन्छ। यो जोखिम मुक्त सम्भाव्यता परीक्षण, प्रक्रिया अनुकूलन र वाणिज्यिक निर्माणमा पछिको कार्यान्वयनको लागि अल्ट्रासोनिकेसन आदर्श बनाउँछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् कसरी Sonication तपाईंको भांग निकासी उत्पादन बढाउन सक्दछ।
किन डिकारबोक्सीलेट क्यानाबिनोइड्स?
डेकारबॉक्सीलेसन एक रासायनिक प्रक्रिया हो जुन यस समयमा कार्बक्सिल समूह भनिने रासायनिक श्रृंखला अणुबाट हटाइन्छ। क्यानाबिस प्लान्टमा, क्यानाबिनोइड्सको बहुमत उनीहरूको एसिडिक रूपमा उपस्थित हुन्छन् जस्तै सीबीडीए, टीएचसीए, सीबीजीए आदि। अम्लीय फार्महरूमा कार्बक्सिल समूह जोडिएको हुन्छ र तिनीहरूलाई कम सक्रिय रूपको रूपमा चिनिन्छ। ती अम्लीय फारमहरू अधिक सक्रिय क्यानाबिनोइड फार्महरू (जस्तै CBD, ∆⁹-THC, CBG आदि) का अग्रदूत हुन्। फार्मास्यूटिकल्स, औषधी र स्वास्थ्य पूरकहरूका लागि, ड्यार्नबक्सिलेटेड, क्यानाबिनोइड्सको अधिक सक्रिय रूप प्राथमिकताका स्पष्ट कारणहरूका लागि हो।
तसर्थ, अम्लीय carboxyl समूह cannabinoids एक प्रक्रियामा "decarboxylation" भनिन्छ हटाईन्छ।
उदाहरण को लागी, भांग सुकाउन को लागी darboxylated (बोलचाली पनि "decarbed") गर्न सकिन्छ। क्यानाबिस उपचारको लागि छोडिदा पनि डकार्बॉक्सिलेसन देखा पर्छ। उपचारको क्रममा, कारबक्सिल चेन बिस्तारै बिग्रन्छ, जुन एक धेरै समय उपभोक्ता प्रक्रिया हो। जब यो हुन्छ, सीबीडीए र अन्य एसिडिक क्यानाबिनोइडहरूले उनीहरूको एसिडिटी गुमाउँछन्। यसरी बढी सक्रिय हुँदै। डिकारबॉक्सीलेसन अन्य प्रक्रियाहरू द्वारा द्रुत गर्न सकिन्छ, जस्तै थर्मो-सोनिकेशन।
मेरो क्यानाबिस एक्स्ट्र्याक्टमा कत्ति क्यानाबिनोइडहरू छन्?
एक्स्ट्र्याक्टमा क्यानाबिनोइड्सको एकाग्रता ठूलो मात्रामा बिरूवाको प्रकार (क्यानाबिस तनाव), निष्कर्षण विधि र बिरुवालाई ड्याकार्बोक्सीलेटेड गरिएको छ वा हुँदैन।